အမှားများ | November 2019
192.168.1.1: ရတဲ့အကြောင်းရင်းရှာ, router သို့မလိုက်မသွားဘူး
ကြိုဆိုပါတယ်! နီးပါးနှစ်ပတ်အတွင်းသင့် Blog အတွက်ဘာမှမရေးပါခဲ့ပါဘူး။ မဟုတ်ဤမျှကာလပတ်လုံးလွန်ခဲ့တဲ့တစ်ဦးစာဖတ်သူကိုကနေမေးခွန်းတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ၎င်း၏အနှစ်သာရရိုးရှင်းသောခဲ့: "အဘယ်ကြောင့် router ကို 192.168.1.1 သို့သွားဘဲနေရသနည်း" ။ ငါမသာသူ့ကိုတုံ့ပြန်ရန်ဒါပေမယ့်လည်းတိုတောင်းတဲ့ဆောင်းပါး၏ပုံစံအတွက်တုံ့ပြန်မှုထုတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အဘယ်ကြောင့် 192 မှမသွားဘူး settings ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လိုမာတိကာ။
Windows ကိုက Wi-Fi ကိုမချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုဒီအမှားနှင့်အတူလုပ်ဖို့?
ဒါ, ထင်ရသော Wi-Fi ကွန်ရက်နှင့်အတူအပြေးလက်တော့ (netbook, etc) အပြေးနှင့်မျှမတို့မေးခွန်းများကိုမေး၏။ တနေ့ပေါ်မှာလှည့် - နှင့်အမှားချွတ်ယူ: "Windows ကို ... Wi-Fi ကိုမချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်" ။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ငါ့အိမ်ကလက်တော့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါး၌ငါသည်သင်တို့ကို (အပြင်, အလေ့အကျင့်ပြပွဲအဖြစ်, ဒီအမှားအတော်လေးဘုံဖြစ်ပါသည်) ဤပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန်နိုင်ပါတယ်သင်မည်သို့ပြောပြချင်ပါတယ်။
သငျသညျကို Windows start သောအခါအမှုမှားယွင်းနေတဲ့အနက်ရောင်မျက်နှာပြင်« BOOTMGR စာနယ်ဇင်း cntrl + Alt + Del ပျောက်နေ»။ အဘယ်သို့ပြုသနည်း
မင်္ဂလာပါ ရက်အနည်းငယ်အကြာသင်သည် (ထိုလမ်းဖြင့်, Window 8 လက်တော့များပေါ်တွင် install ထားပြီး) ကလက်တော့ပ်ကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာပေါ်လာတဲ့အရာ, " ... BOOTMGR ပျောက်ဆုံးနေသည်" အတော်လေးတစ်လည်ချောင်းနာ ​​bug ကိုကြုံတွေ့။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်: အလားတူပြဿနာ (ငါကတစ်ဒါဇင်ကျော် / တရာကလူရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ်ထင်တယ်) ... ယေဘုယျအားဖြင့်, ဒီအမှားပေါင်းများစွာအကြောင်းပြချက်များအတွက်ပေါ်ပေါက်နိုင်လျှင်အမှားလျင်မြန်စွာဘာလုပ်ရမှန်းအသေးစိတ်ပြသနိုင်ဖို့, တစ်ပြိုင်နက်မျက်နှာပြင်ကနေတချို့ screenshots များဖယ်ရှားခြင်း, fix နိုင် ကွန်ပျူတာကိုအခြား hard disk ကိုသတ်မှတ်ထားခြင်းနှင့်သင်သင့်လျော်သော setting များကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ; , BIOS settings ကို reset သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲပစ်; မလျော်ကန်သောပိတ်ကွန်ပျူတာ (ဥပမာ, တစ်ဦးချွန်ထက်ပါဝါပျက်ကွက်) ။
... ငါ "အင်တာနက် access ကိုမပါဘဲအမျိုးအမည်မသိကွန်ယက်ကို" အမှားဘယ်လို fix သလဲ?
မင်္ဂလာပါ ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်, Window အမှားများကိုအမြိုးမြိုးမရှိဘဲအလွန်ပျင်းစရာကောင်းလိမ့်မလဲ! သူတို့ထဲကတဦးတည်းတွင်ငါဟုတ်ကဲ့မရှိ, မများနှင့်မျက်နှာ။ အောက်ပါတို့မှားယွင်းနေသည်အနှစ်သာရ: ကွန်ယက်မှဝင်ရောက်ခွင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်စနစ်ဗန်းထဲမှာလာမယ့်နာရီငှါ, မက်ဆေ့ခ်ျကို "အင်တာနက် access ကိုမပါဘဲအမျိုးအမည်မသိကွန်ယက်ကို" ... ပိုမကြာခဏမထက်, ကပေါ်လာသည်, ကွန်ယက် setting များကိုချော် (သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားတယ်) လာသောအခါ: ဥပမာ, သင်သည်သင်၏ ISP ကမှအ setting များကိုပြောင်းလဲပစ်လျှင်သို့မဟုတ် upgrade ကို Windows နှင့်အခြားသူများ (reinstall) ။
မှားယွင်းနေသည်« reboot နှင့်သင့်လျော်သော Boot တက် device ကိုရွေးပါသို့မဟုတ်ရှေးခယျြထား Boot တက် device အတွက် Boot တက်မီဒီယာ INSERT နှင့်တစ်ဦး key ကိုနှိပ်»အပေါ်အာဏာ ...
မင်္ဂလာပါ ယနေ့ဆောင်းပါးက "အဟောင်း" အမှားတမြှုပ်နှံနေသည်: "reboot နှင့်သင့်လျော်သော Boot တက် device ကိုရွေးပါသို့မဟုတ်ရှေးခယျြထား Boot တက် device အတွက် Boot တက်မီဒီယာကိုထည့်ပြီး key ကိုနှိပ်" (Russian သို့ဘာသာပြန်ထားသောအရာဖတ်: "Reboot နှင့် select လုပ်သင့်လျော် Boot တက်ကိရိယာသို့မဟုတ်က boot အတွက် Boot တက်မီဒီယာထည့်သွင်း မည်သည့်သော့ "တွေ့စက်ကိရိယာနှင့်နှိပ်ပါ။
အမှား DISK BOOT ပျက်ကွက် fix ဖို့ကိုဘယ်လို, INSERT system disk Enter နှိပ်ပါ?
ယေဘုယျအားဖြင့်စာသားဘာသာပြန်ထားသောလျှင်, အမှား "DISK BOOT failure, INSERT system disk Enter နှိပ်ပါ" ဟုအဆိုပါ Boot တက် disk ကိုကျိုးသည်, သင် Enter အခြား system ကို disk နဲ့စာနယ်ဇင်းထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ဆိုလိုသည်။ ဒါဟာအမှားအမြဲတမ်း hard drive ကို (တခါတရံ, ပေမယ့်များနှင့်အကြောင်းအချက်ပြမှုများ) ဝတ်ဆင်ထားပြီးမဆိုလိုပါ။
မင်္ဂလာပါ အမှားတွေကနေအဘယ်သူမျှမကိုယ်ခံစွမ်းအားဖြစ်ပါသည်: အဘယ်သူမျှမတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာ (အတွေ့အကြုံကိုပြသကဲ့သို့) ... သင်တစ်ဦးအမှား 651. ကအတော်လေးတွေအများကြီးပေါ်လာနိုငျသောကွောငျ့အရာများ၏အကြောင်းပြချက်တခါတရံ PPPoE ကနေတဆင့်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ။ ဤဆောင်းပါး၌ငါအဓိကက၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုအဘို့အကြောင်းပြချက်အဖြစ်ကဒီအမှားပြင်ပေးဖို့နည်းလမ်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။